gmail2steps verification Problem!!! — MYSTERY ZILLION
gmail2steps verification Problem!!!
July 2012 edited July 2012 in Internet Security
2 step verification ကို မိမိရဲ့ အီးမေးမှာ ထည့်ထားတာကို ပြန်ဖြုတ်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းအနားမှာ မရှိရင် အဲဒီအကောင့်ကို ဖွင့်လို့ မရပါဘူး။ လုံခြုံတာကတော့ မှန်ပေမဲ့ ဆင်းကဒ် တစ်ခုခု ဖြစ်လျှင် အဲဒီအကောင့်ကို ဖွင့်ဖို့ မလွယ်ကူတော့လို့ပါ။ ထည့်တာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ဖြုတ်တော့ ဘယ်လို ပြန်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍...
၁။ Google Account Settings ကိုသွားပါ။
၂။ ဘယ်ဘက်မှာ Security ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်2step verification ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူ့ဘေးက Edit ထဲ၀င်လိုက်ရင်စာတွေအများကြီးပါတဲ့ Page တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
၄။ အပေါ်ဆုံးရဲ့ညာဘက်နားမှာ Turn off2step verification ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒါနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
၅။ တကယ်လို့2step verification လုပ်တုန်းကကိုယ်ဖြည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ် info: တွေဖျောက်ချင်ရင်အောက်ဆုံးမှာ clear settings ဆိုတာရှိပါတယ်။
Google ကနေကိုယ့် gmail ကို2step verification ပိတ်လိုက်ကြောင်း email ပို့ပါလိမ့်မယ်။
PS: ဒီဟာဖြေဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်2step verification အပိတ်အဖွင့်လုပ်ကြည့်ပြီးသွားပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။